03 may teto Mahajanga: “tsy hisy mpanao gazety Malagasy ho voafonja noho ny asany” | Région Boeny
Tsy hisy intsony mpanao gazety Malagasy ho voafonja fotsiny amin’izao noho ny asany hoy ny Ministry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana fa amin’izao andron’ny Repoblika mijoro ara-dalàna izao dia ny lalàna irery ihany no mibaiko ny asa ataon’ny tsirairay.
Io no anisan’ny fanambarana mafonja nataon’ny Ministra tao amin’ny Lapan’ny Tanànan’I Mahajanga, nandritra ny fankalazana nasionaly ny andron’ny Fahalalahana maneho hevitra natao taty amin’ny faritra Boeny ny Alarobia 03 may 2017.
Hetsika maromaro no nentina nanamarihana izany teto Mahajanga, niarahan’ny mpanao gazety ampolony maro avy eto an-toerana sy ireo solotenan’ny isam-paritra ary ny avy ao an-drenivohitra, miankina sy tsy miankina.
Natomboka tamin’ny diaben’ny Fahalalahana tamin’ny 07 ora maraina notarihin’ny Ministra sy ireo manampahefa niara-dia taminy. Niainga teny amin’ny Bord de la mer nihazo ny Lapan’ny Tanàna. Teo indray dia «Zumba» niarahan’ny rehetra no nanohizana azy. Taorian’izay ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy tao amin’ny Trano fivorian’ny Kaomin’i Mahajanga.
Nisy ny fandraisam-pitenenena nifandimby ka anisan’izany ny Lehiben’ny faritra Boeny izay nanao hafatra manokana ho an’ny mpanao gazetin’i Mahajanga. Amin’ny maha zoky mpanorina ahy hoy izy dia mananatra aho, aoka re mba tsy ho vakivaky ny AJM (Association des Journalistes de Mahajanga) fa najoro izy io tany amin’ny taona 1999, mba ho fikambanana mpiaro ny mpanao gazety teto Mahajanga fa tsy natao hampizarazara azy ireo.
Tsiahivina fa izy dia efa mpanao gazety fahiny tao amin’ny Radio Kalizy teto Mahajanga izay lasa RTA Mahajanga ankehitriny. Ary filoha mpanorina ny Association des Journalistes Professionnels de Mahajanga tamin’izany. Nisy tokoa mantsy, volana vitsivitsy lasa izay, mpikambana avy amin’ny AJM, izay tarihin’i Vanessa Zafimahova (Ino Vaovao Mahajanga) amin’izao fotoana, tonga nanao tatitra taminy, mikasika ity fizarazaran’ny mpanao gazetin’i Mahajanga ity.
Nanohy izay fananarana ny mpanao gazetin’I Mahajanga izay ny Ministra tompon’andraikitra ka nilaza fa tsy eto ihany no misy ny fivakivakisana sy fizarazarana toy izany. Manao antso avo ny mpanao gazety Malagasy rehetra nefa ny tenany amin’ny maha Ministra tompon’andraikitra azy, ka nanao hoe “miavia daholo mba hihavana sy hivondrona”, fa efa tsy «ministra Tank» na «ministra Buldozer» intsony izy, araka izay niantsoana ahy tamin’ny fitondrana Tetezamita aho, fa efa ministry ny Repoblika mijoro ara-dalàna.
Anisany nanamarika ny fankalazana ny andron’ny 03 may teto Mahajanga ihany koa ny fanaovan-tsonia ny Fifanaraham-piaraha-miasa lasitra teo amin’ny Sampan’ny Firenena mikambana (Système des Nations Unies) sy ny Ministeran’ny Serasera. Voafaritra ao anatin’io Fifanaraham-piaraha-miasa io fa hisy ora fandaharana ho atolotry ny ORTM ho an’ny NU izay mbola ho faritana ny fotoana sy ny votoatiny. Ho setrin’izay kosa dia hanao tohana ho an’ny asa fanaovan-gazety miankina sy tsy miankina ny NU, ara-pitaovana, ara-teknika ary ara-piofanana.
Nisy taorian’izay fitsidihana ireo fampiratiana ny asan’ireo tranon-tserasera misy eto Mahajanga. Ary fijerena tahirin-kevitra sy tahirin-tsary nifarimbonan’ny NU sy ny OJM, mikasika ny loha-hevitry ny fankalazana, narahina ady hevitra no namaranana ny fotoana.